Iindaba-Ukuqonda ukubumba kwemela: ukwenza kunye nokuthelekisa izibonelelo kunye nezinto ezingalunganga zokufa kweemela ezahlukeneyo
Iphepha lePoron Foam
Hot Ukunyathela Ukunyathela Die
Ukuqonda ukubumba kwemela: ukwenza kunye nokuthelekisa izinto eziluncedo kunye nezinto ezingalunganga zokufa kweemela ezahlukeneyo
Ukuqonda isixhobo sokubumba
Kukho iintlobo ezingaphezu kwe-100 zeemela ngokweeji yeblade, ukuqina kwebala kunye nebala, iinkozo zebala kunye netekhnoloji yokuqhubekeka komphezulu kweleyidi kunye nebala.
Uphuhliso kunye nokuveliswa kwesikhombisi sezixhobo kusekwe kukuqonda okunzulu kolwazi lweemfuno zabathengi kunye nezinto eziphathekayo. Ulwazi abathengi abafuna ukuluveza luchaziwe kumzobo woyilo, ke kuya kufuneka sihlolisise imizobo kuqala, siguqule iimfuno zabathengi kwinkqubo yabo yokuhamba kunye nokunikezelwa kwemveliso yokugqibela.
Uyilo lwenkqubo yokuvelisa kufuna ukuba iinjineli zibe nokuqonda okubonakalayo kwezixhobo. Enye into ebalulekileyo kukuba ube nokuqonda okuhle ngokusebenza koomatshini benkampani yethu. Kunokuthiwa ukuqonda izinto kunye nokuqonda ukusebenza koomatshini zizakhono ezisisiseko ekufuneka iinjineli zibe nazo.
Yazi into efunwa ngabathengi, yazi iipropathi zemathiriyeli, unxulumanise ukusebenza kwemveliso yoomatshini bethu, kunye nokwakha imeko yemveliso engqondweni. Ungasombulula njani iingxaki? Isisombululo yinkqubo yetekhnoloji oyiyilayo, kwaye isixhobo sokubumba sisixhobo esibalulekileyo sokuguqula into ocinga ukuba yenzeka. Ngaba inokufezekiswa
Mold Laser imela nokuvunda
Ukuchithwa okuphezulu kwetemplate yeemela kwenziwa ngokusebenzisa amandla e-laser, ukuze kufezekiswe injongo yokufaka umsiki.
Yintoni i-QDC mold?
I-QDC iyafa isebenzisa imo yokudibanisa imodyuli, isebenzisa imela yokurola okanye imela umhlwa ukuze ifakele kwisiseko sehardware sokubetha kunye nokucoca; kuba kufa kunokutshintshwa ngokukhawuleza ngokweemfuno ezahlukeneyo zokusika, kuthathelwa ingqalelo izibonelelo zesixhobo esifa kunye nokuchaneka kunye nozinzo lokufa.
Ukuthelekisa imizobo yokwenyani yemela eyahlukeneyo iyafa: (IJapan, ngokubanzi, unyango lwesipili) izinto ezahlukeneyo zifuna iincakuba ezahlukeneyo ukufezekisa iziphumo ezibiza kakhulu. Kukwakho nokubumba kwemela, izinto eziphathekayo, umqamelo we-sponge elastic of the three nazo zibaluleke kakhulu. Ezinye izinto ziya kuvelisa umahluko mbini emva ukusika die. Ukwenza isixhobo elungileyo sife, kuyimfuneko nakwisixhobo sokubumba isixhobo ukuba sibe nokuqonda kweempawu zento leyo, kwaye ke siyile iteknoloji yokuqhubekeka ehambelanayo.
Ukwenziwa nokuveliswa kwesixhobo sokubumba
Sithatha inkqubo yokuvelisa die kufa njengomzekelo ukuqonda ukuqhubekekiswa nokuveliswa komngundo isixhobo
Inkqubo yokuhamba kwedysching die
1 .order ukufumana
Isebe lokufumana linoxanduva lokufumana ii-imeyile zabathengi kunye nokunxibelelana nabathengi kwiimfuno zokuvelisa, ikowuti kunye nexesha lokuhambisa. Emva kokuqinisekiswa komthengi, iphepha lokuvelisa ukungunda liya kuvulwa kwaye ukuhlelwa kokufayilwa kuya kuqalwa. Okokugqibela, umzobo uyakwenziwa umboniso bhanyabhanya okhethekileyo umhlwa, oya kuthi uhanjiswe kwisebe lomhlwa kunye nomsebenzi.
Emva kokufumana ifilimu kunye nomsebenzi, isebe le-corrosion liqinisekisa ubukhulu beplate, ukuphakama kwemela kunye nohlobo lwezinto eziphathekayo, kwaye emva koko unamathisele ifilimu, uyiprinte kwaye uyiveze. Okokugqibela, prototype yokubumba iboniswa emva konyango lwamayeza olwelo. Ukuba umsebenzi wokubhengeza awenziwanga kakuhle, kuyafuneka ukuba ulungise inani ngaphambi kokungena kumatshini wokubola. Emva kokuhlangabezana neemfuno, inokukhutshwa. Emva kokuhlamba idiphozithi yecoke, inokuthunyelwa kwisebe elilandelayo. Icandelo umhlwa na isebe processing rough ukuba ngumngundo.
Emva kokufumana machining erhabaxa, isebe lokukrola uyifaka kumatshini ukuba iqhutywe emva kokuhlolwa ezibonakalayo kunye nesiqinisekiso. Ngenxa yomahluko wobungakanani bokufa, ubunzima kunye nobude bomgca wesixhobo, ixesha lokuvelisa lahlukile. Ngokubanzi, isixhobo sokubumba sithatha iiyure ezingama-1-4, kwaye isixhobo sokubumba esikhethekileyo sifuna iiyure eziyi-8 okanye ngaphezulu kweeyure ezingama-24 ukugqiba umatshini we-CNC. Emva kokugqitywa kovavanyo, inkokeli yeqela inokuthunyelwa kwi-QC emva kokuba igqityiwe kwangaphambili ukuba akukho ngxaki.
I-QC inoxanduva lokuhlola ubungakanani bokufa, isixhobo, njl njl, kwaye inoxanduva lokwenza ingxelo yokuhlola, emva koko ithunyelwe kunyango lobushushu.
5. ngokwempahla yokubetha umthengi yahlulwe ngeendlela ezimbini zokulungisa
Ukuba umbandela awunayo i-adhesive, inokunyangwa ngonyango lokushisa ngokubanzi. Ukongeza kunyango lobushushu ukonyusa ubulukhuni, izinto ezizisebenzelayo kufuneka zityatyekwe ngeTeflon. I-Teflon inokwenza iimveliso zokuhlukumeza zingabinamathele ekufeni, kodwa ngenxa yenkqubo ekhethekileyo, ukutyabeka kweTeflon akuyi kuchaphazela ubukhali bento efayo. Emva kokuba ingxelo yokuhlola itywinwe ngumphathi, idiski inokupakishwa kwaye ithunyelwe.
6. unyango lwesipili
Olu nyango lunokususa ukutya okuziinkozo ezincinci kwicala lesiphelo semela yokufa, ukufezekisa isiphumo sesipili, kunye nokusombulula ngokufanelekileyo ingxaki ye-burr kunye nothuli xa imveliso ihlaba kunye nokuzoba, kwaye yenze umphetho wemveliso ugude kwaye ugude. Kufanelekile ukubetha kunye nokusika iimveliso ezineemfuno eziphezulu. Okwangoku, inkampani yethu yeyommese wesipili kwaye yeyomenzi okhethekileyo kwilizwekazi lase China.
Ixesha Post: Oct-19-2020
Funda ngakumbi ngathi nakwishishini
Iimpendulo zemibuzo malunga nesixhobo esichanekileyo ...
Ukuqonda ukungunda kwemela: ukwenza kunye ...
Isidlo sangokuhlwa sonyaka
Umnxeba: (0086) 186-8244-3350
Idilesi: Hayi. 47, Futang Road, Tangxiachong Community, Yanluo Sub-kwisithili, Bao'an District, ShenZhen, Guangdong, China
Ukufa kweLaser, Inkunkuma-Drop Ukuchitha Rotary Die, Imaski Rotary Die, Umphezulu Umphezulu mfanekiso Die, Steel Die mfanekiso, Auto-Material Ukuzalisa mfanekiso Die,